Wararka - Tallaabo Yar Farqiga Weyn- Guddiga Biyo
Dib -u -warshadaynta dhaqanka PE
： Material Dib -u -warshadaynta alaabta farshaxanka
5.qoosh iyo dheelitirnaan
Le ： Caqabad
1. Qayb yar oo ka mid ah balaastigga duugga ah ayaa loo soo ceshay dib -u -isticmaalka ama dib -u -warshadaynta.
2. Dib-u-warshadaynta kharash-ku-ool ah oo hufan ee durdurka caagga ah ee isku dhafan ayaa laga yaabaa inay tahay caqabadda ugu weyn ee hortaagan warshadaynta dib-u-warshadaynta.
Material Alaab ceyriin ah
Noolaanshaha noolayntu kuma xidhna alaab ceeriin ah, ee waxay ku xidhan tahay gebi ahaanba qaab -dhismeedka kiimikada ee polymer -ka.
Po po Iskudhin / Bixin karin
1 ：Nooleyn kara waxaa lagu daray mid ka mid ah habkii bacriminta.
2, Kaarboon -ka -dillaaca macdanta kaarboon ayaa ku jira mawduuca ka dib markii uu dheefay microorganism -ka kaarboonka ayaa si buuxda loogu sii daayay goobada
Process process NUAP Geedi socodka compost -ka Bio / PLA
： ： Shahaadada aan haysano
Waqtiga dhejinta: Apr-01-2021